warkii.com » Mahdi Guuleed oo xilka ka qaaday xoghayihii joogtada xafiiska R/W ee uu magacaabay toddobaad un kahor
Mahdi Guuleed oo xilka ka qaaday xoghayihii joogtada xafiiska R/W ee uu magacaabay toddobaad un kahor
Muqdisho (warkii.com) – Sii-hayaha Ra’iisul wasaraha ahna Raiisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xilka ka qaaday xoghayihii joogtada ee xafiiska ra’iisul wasaaraha Cabdirasaaq Xuseen Aadan, toddobaad un kadib markii uu xilka u magacaabay.
Qoraal kooban oo uu soo dhigay boggiisa twitter-ka ayuu Mahdi Guuleed ku yiri “Waxaan Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim u magacaabay in si KMG ah uu u haayo xilka xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/wasaaraha. Waxuu bedelayaa Cabdirisaaq Xuseen Aadan oo si KMG ah horay ugu hayay xilkaan.”
Waxaan Cabdiraxmaan Mucaawiye Sheekh Ibraahim u magacaabay in si KMG ah uu u haayo xilka xoghayaha Joogtada ah ee Xafiiska R/wasaaraha. Waxuu bedelayaa Cabdirisaaq Xuseen Aadan oo si KMG ah horay ugu hayay xilkaan.
— Mahdi M. Gulaid (@KhadarGulaid) August 1, 2020
Ma cadda waxa keenay isbedelkan deg degga ah ee uu sameeyey Mahdi Guuleed, hase yeeshee warar aan helnay ayaa sheegaya in arrintan ay ka dhalatay dhacdo aan la mahdin oo maanta ka dhacday xafiiska ra’iisul wasaaraha, taasi oo weli aan baaritaan ku hayno sax ahaanshahaeeda, dibna kasoo sheegi doono, Insha Allah.